Bible Mu Nsɛm Nea Bible Ka No Bam - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Ɛnyɛ nneɛma a atwam ho asɛm a ɛyɛ nokware nko na Bible no ka, na mmom ɛka nea ɛbɛba daakye nso. Nnipa ntumi nka nea ɛbɛba daakye. Ɛno nti na yenim sɛ Bible no fi Nyankopɔn nkyɛn. Dɛn na Bible ka wɔ daakye ho?
Ɛka Onyankopɔn ko kɛse bi ho asɛm. Saa ko yi mu no Onyankopɔn beyi bɔne ne abɔnefo nyinaa afi asase so, nanso ɔbɛbɔ wɔn a wɔsom no ho ban. Onyankopɔn hene, Yesu Kristo, bɛhwɛ ma Onyankopɔn asomfo anya asomdwoe ne anigye, ne sɛ wɔrenyare bio anaasɛ wɔrenwu.
Yɛn ani betumi agye sɛ Onyankopɔn bɛyɛ paradise foforo wɔ asase so, ɛnte saa anaa? Nanso sɛ yɛbɛtra paradise yi mu a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ biribi. Wɔ adesua a edi akyiri wɔ nhoma yi mu no mu no, yehu nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛanya nneɛma pa a Onyankopɔn de bɛbrɛ wɔn a wɔsom no no mu anigye. Enti kenkan ƆFA 8 yi na hu nea Bible ka sɛ ɛbɛba daakye.